ulwazi lokuba umatshini wokugaya irayisi usebenza njani kumatshini wokuphumelela
Ngokuphuculwa ngokukhawuleza koomatshini bezolimo, oomatshini abachaphazeleka nerayisi baya besiba baninzi ngakumbi. Ngaxeshanye, iintlobo ezininzi ezintsha zezixhobo zokulungisa irayisi ziye zavela, njenge Umatshini wokucheba ngerayisi, Umatshini wokupakisha iilayisi, Paddy De-isicoci, Iarice Separator kunye nokunye.
Iindawo zokugcina umatshini wokugaya irayisi zibandakanya isikrini selayisi, imingxunya, kunye nesilinda esimhlophe. Ngenxa yokuxabana okuhlala kwenzeka phakathi kwala malungu neenkozo, iindawo ezininzi ezisecaleni zinxitywa ngokulula ukuya kwinqanaba elithile. Ngokunxiba kakhulu, isivuno kunye nomgangatho yerayisi emhlophe ngokuqinisekileyo ziya kuncipha. Ngeli xesha, kuya kufuneka uzitshintshe iindawo ezingasasebenziyo. Nceda ujonge kwiNcwadi yoMsebenzisi ngolwazi malunga nokudibanisa kunye nokufaka izinto ezisecaleni.